Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay gabar waday waxyaabaha Qarxa. | raascasayrmedia.com
← Xoogagga Xarrakada Mujaahidiinta Al-shabaab oo saakay lagu arkayo Guud ahaan Magaalada Beledwayne Iyo Xisbul Islaam Kala firxaday
Sheekh Yuusuf Indha Cadde oo Xabsi Guri ku jira →
June 16, 2010 · 5:19 pm
Booliska Puntland oo gacanta ku dhigay gabar waday waxyaabaha Qarxa.
Ciidamada Ammaanka Puntland ee Magaalada Galkacyo ayaa Gacanta ku dhigay Gabar Da’yar oo sidday waxyaabaha Qarxa xilli ay ciidamadu wadeen howl gallo lagula dagaalamayo falalka amni darrada ah.
Taliyaha qeybta Booliska ee Waqoyiga Magaalda Gaalkacyo Muuse Axmed C/raxmaan Muuse Xasaasi oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in ciidamada Booliska ay gacanta ku soo dhigeen gabar yar oo 15-jir ah oo gaari gacan ku waday Sadex gantaal oo ah walxa Qarxa.
Muuse Xasaasi ayaa intaa ku daray in ciidamadu ay heleen xog ku saabsan arrintaasi islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen gabadhaasi, waxa uuna tilmaamay in gabadhu ay haatan ku xiran tahay Saldhiga Booliska ee magaalada Gaalkacyo oo ay ciidamadu su’aalok u weydiinayaan.
Taliyaha ayaa sheegay in arrintani ay qeyb ka tahay Howl gallo ballaaran oo maalmihii ugu danbeeyay ay ciidamada booliisku ka wadeen Magaaladaasi, kaas oo looga hortagayo falalka Ammaan darrida ah ee xilliyadii la soo dhaafay ku soo badanayay Galkacyo.
Dhanka kale waalidka Gabadhaasi ayaa ku gacan seeyray hadalada ka soo yeeray taliye Muuse Xasaasi, waxyna sheegeen in gabadhaasi ay gaari gacan ku wadday waxyaabo qashin ah oo ay ku jireen qolofka rasasta oo faaruuq ah iyadoo gabadha ku sheegay in ay aheyd mid madaxa looga jiray oo xanuunsaneeysa.